तीजमा तपाईंको नाममा कसैले व्रत बस्दा कस्तो लाग्छ ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः भाद्र १४, २०७६ - साप्ताहिक
मलाई आफू कलियुगको साक्षात् महादेव र व्रत बस्ने नारीचाहिँ पार्वतीझैं लाग्छ ।
अरु जिम जाने सिक्स प्याक भने आफ्नो निस्किएजस्तो, अरूले काम गरेको पारिश्रमिक मलाई आएजस्तो अनि अरूलाई नै सोधेको प्रश्नको जवाफ मैले दिएजस्तो ।
मेरो व्यक्तिगत भन्दा पनि आफ्नो स्वास्थ्यका लागि व्रत बस्नु राम्रो हो, त्योसँगै आफ्नो संस्कृति र परम्परा जोगाउनु अझ आवश्यक कुरा हो ।
कसैले मेरा लागि व्रत बसेको थाहा पाएँ भने मेरो नाममा व्रत नबस्नू भनेर सम्झाउँछु । मलाई अरुलाई दुख दिन मन लाग्दैन । यदि बसिहाले आशीर्वाद दिउँला ।
मलाई त जिन्दगीदेखि विरक्त लागेर छिट्टै मर्ने मन हुँदा पनि मर्न नदिएजस्तो लाग्छ ।
त्यस्तो त केही लाग्दैन, बरु काउकुती लागेजस्तो चाहिँ हुन्छ ।
सर्वप्रथम त भो पर्दैन व्रत बस्न भनेर सम्झाउँछु, जसो गर्दा पनि पटक्कै नमाने म पनि उनका लागि व्रत बसिदिन्छु ।
धर्म–संस्कृति जोगाउनु राम्रो कुरा हो । मेरो भविष्यको हुने वालीलाई मेरो नाममा व्रत बसेर मेहन्दी लगाएर मलाई कमजोर नबनाऊ, सक्छ्यौ भने मेरो नामको टाटु हान भन्छु ।
मेरो नाममा व्रत बस्नुभन्दा पनि व्रत बस्दा व्रत बस्ने मान्छेकै शरीरलाई राम्रो हुन्छ । अर्को कुरा, संस्कृतिको पनि संरक्षण हुन्छ । यद्यपि कसैले तपाईंको नाममा म व्रत बसेको छु भन्दा ढाँटेको हो कि जस्तो लाग्छ ।
भरत खरेल/शिव भण्डारी
मेरो नाममै कसैले व्रत बस्छ भने मेरा लागि पनि कोही रहेछ है जस्तो होला ।
अहिलेसम्म त मेरा लागि कोही व्रत बसेको थाहा छैन । थाहै नदिई बसेछन् भने ठीकै छ ।
मेरा लागि पनि यो धर्तीमा कोही छ जस्तो होला ।
मलाई रमाइलो लाग्नेछ अनि म आफैलाई भाग्यमानी मान्नेछु । खुसीमा व्रत बस्नेलाई चुम्मा खाइदिऊँ जस्तो पनि लाग्ला ।
बाँचुन्जेल वायु र आयुको समस्या त हुन्छ नै तर पनि कसैले आफ्नो नाममा व्रत बसेर आयु बढ्छ भन्नु भ्रम मात्र हो ।
मलाई आश्चर्य लाग्नेछ, ताज्जुब हुनेछ, म तीनछक पर्नेछु ।
यदि कसैले कसैको नाममा व्रत बस्छ भने त्यो आयु बढ्ने नभएर एक–अर्काप्रतिको आदर र सम्मान हो । यसले गर्दा कुनै पनि सम्बन्ध अझ प्रगाढ र बलियो हुन पुग्छ । मलाई पनि यस्तै लाग्छ । अर्को कुरा श्रीमान्ले श्रीमतीका लागि अनि श्रीमतीले श्रीमान्का लागि व्रत बस्छन् भने त्यो अझ राम्रो कुरा हुन्छ ।
मलाई खुसी लाग्छ तर आफूलाई कमजोर बनाएर व्रत बसेको राम्रो होइन । व्रत नबसी पतिको लामो आयुको कामना गर्न सकिन्छ । सिधा–सिधा भन्नुपर्दा यो कुरीति मात्र हो ।
आफ्नै नाममा कसैले व्रत बस्दा मलाई त रिंगटा नै लाग्छ होला ।
तिमीले व्रत बसे पनि नबसे पनि पाउने मलाई नै हो । भोकै बसेर ग्यास्ट्रिक चाहिँ नजन्माऊ भन्न मन लाग्छ ।
मेरा लागि व्रत बस्नु पर्दैन भन्छु म त ।
मलाई त केही लाग्दैन तर व्रत बस्ने व्यक्तिलाई चाहिँ भोक लाग्छ होला ।
आफ्ना लागि भनेर त्यस्तो व्रत नै बस्ने कोही भेटे मलाई त अनौठो लाग्थ्यो ।
अहिलेसम्म मेरा लागि व्रत बस्ने मान्छे फेला पारेको छैन, त्यसैले त्यस्तो कुनै खासै अनुभव छैन ।
मानिसहरूका अगाडि तपाईंका लागि व्रत बसेकी छु भने पनि लुकीलुकी चाउमिन र मःम खान्छन् जस्तो लाग्छ ।
व्रत त बस्थिन होला तर उनी अहिले आफैं बिरामी छिन् । त्यसैले मलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनाबाहेक अरू केही भन्नु छैन ।
तीजमा भन्दा पनि बेलाबेलामा मिलाएर आफ्नै लागि आफै व्रत बस्नु राम्रो हो कि ?
त्यसरी कसैले व्रत बसे म त खुसीले पागल नै हुन्थें होला ।
आफ्नै लागि कसैले व्रत बसेको थाहा पाउँदा चियामा चिया मसला हाली उमालेजस्तो लाग्छ ।